Lazy Layisha Izinkinobho Zomphakathi ngeSocialite.js | Martech Zone
Namuhla ngibe nosuku oluhle ngethimba lewebhu ku-Angie's List. Uhlu luka-Angie belulokhu lwakha indawo yabo yaba umtapo wolwazi omangalisayo… futhi ngaso sonke isikhathi baqhubeke nokusheshisa isiza sabo. Amakhasi abo alayisha ngejubane elingaboni. Uma ungangikholwa, vela leli khasi ku Iminyango Yegalari.
Leli khasi lifaka phakathi izithombe, ividiyo, nezinkinobho zomphakathi… futhi kusalayishwa ngama-millisecond. Ukuqhathanisa isiza sabo nesami kufana nokujaha i-Prius nge-F-16. Azikenziwa okwamanje, noma, zihlala zifuna izindlela zokwenza ngcono umuzwa wamakhasimende futhi zenze okuqukethwe kutholakale futhi kwabelwane ngakho.
Asinalo ithimba lokuthuthukisa ngokugcwele noma izinsiza zenkampani yomphakathi, ngakho-ke inqubekela phambili yethu ihamba kancane kunohlu luka-Angie. Sinomphathi omuhle nge ligcina uthi lokuphotha luzungeza - sisebenzisa i-caching yabo ethuthukile ne-CDN, kepha siyazi ukuthi kukhona ezinye izinto ezisilimazayo. Isibonelo, izithombe zethu azithuthukisiwe. Kunezinsizakalo lapho ongaguqula izithombe zakho zibe yizingxenyana zosayizi wazo ngenkathi ugcina ukucaciseleka kwazo… sizibhekile.
Ngenkathi ngibabonisa isiza sethu, ngagobhoza futhi ngilengisa ikhanda lami lapho ikhasi limakhaza lapho kulayishwa inkinobho yomphakathi. Ngicabanga ukuthi bekuyi-Facebook. Argh… umzuzwana noma emibili kamuva inkinobho yavela futhi lonke ikhasi lalayishwa. Ugh.
Lapho ngichaza lolu daba, unjiniyela wabo ngokushesha waba nesixazululo, ukuzijabulisa.js. ISocialite inikeza indlela elula yokuqalisa nokwenza kusebenze inqwaba yezinkinobho zokwabelana komphakathi - noma kunini lapho ufisa khona. Kumthwalo wedokhumenti, ku-hover ye-athikili, kunoma imuphi umcimbi! Njengoba i-socialite ilayisha izinkinobho ngokungenakuqhathaniswa, idokhumenti ngeke ilinde ngenkathi ilinde i-50kb yezokuxhumana.
Ngokujabulisayo, sekukhona i-plugin ye-WordPress efaka iSocialite, ebizwa WPSocialite. Namuhla kusihlwa ngikhiphe yonke ikhodi yami eyenziwe ngezifiso yokulayisha izinkinobho futhi ngasebenzisa i-WPSocialite. Ngikwazile ukwenza ngokwezifiso i-CSS futhi ngashintsha izinkinobho ebengizifuna. Ngibheke phambili ukuthi ezinye izinkinobho ezingeziwe zizongezwa ngokuzayo - njengeBuffer noma iReddit… kepha lokhu kuphelele manje!